Ucid Codkaaga Ugu Deeq' Wu Inaga Kasbadey Wana Doorkiisi ''
Wednesday September 06, 2017 - 21:28:38 in Maqaallo by Mr.Kalshaale Media
Anigoo ka mid ah golaha dhexe Xisbiga Ucid ahna guddoomiyaha Ucid ee Gobolka Wales, UK.
Waxaan shacabkayga reer Somaliland ee qiimaha iyo sharafta badan labeenti dalkeena, dhallinyarta haweenka iyo aqoonyahanada ugu baaqayaa doorkan muwaadin taageer, u hilli una codee Xisbiga daryeelka iyo caddalaada ee Ucid.
Sabaabto ah waa Xisbi u hoggaamiyo siyaasi haayin ah halyey qaran dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa u dacaad. Isla markaasna ku suntan bal dahab ah nabadeyn mideyn qarameed darafyada Somaliland isku keenay isagoo xil dowladeed marna qaban Murashax, madaxweyne Mud,Eng' Faysal Cali Waraabe.
Guddoomiye Faysal Cali Waraabe loogama baran kursi ku diriir colaad hurin iyo kala fogeynta Beelaha Somaliland ka kooban tahay toona isagoo muddo dheer soo ahaa hoggaan mucaarid doorashooyiin horree laga helay laba jeer hadana muujiyey dareen, leh kalsooni Iiman wadanimo buuxda.
Fbuugyado idil faalada
Waxgaradkii dhallinti iyo aqoonyahan
Geesi fiiro dheero
Foolxumo qabiil iyo
Dano gaar ah eegayn
Markaa foodka Loo kaco
Doorkan Faysal weeyaan
Farxad Lagu gudoonsii
By: Gud CaliAli Dheeg